थाकस सुनसरी को ८ औ जिल्ला अधिवेसनबाट आउने नेतृत्व कर्ताको चर्चा -
थाकस सुनसरी को ८ औ जिल्ला अधिवेसनबाट आउने नेतृत्व कर्ताको चर्चा
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ०४, २०७५ समय: १३:०५:४२
झुम्का,भदौ ४ । नेपाली भुमिपुत्र थारु समुदायको हक अधिकार,पहिचान संस्कार संस्कृति,भाषा भेष लगायतको सवाल संरक्षणलागी २००५ साल देखिनै मुद्धा उठान गर्दै आईरहेको छ । समय अनुरुप नेपालको संबिधानमा आफनो पहिचानकोलागी चरणबद्ध आन्दोलनहरु गर्दै आएको छ ।
नेपालको पहिलो जाति थारु समुदायनै रहेको खोज अनुसन्धान तथा ईतिहासले बताईरहदा आझै पहिचान सहितको अधिकार स्थापित भईनसकेको थारु बुद्धिजिविहरुले बताउछन् । यसैले थाकस अहिलेपनि आन्दोलनकै निरन्तरता दिई रहेको थाकसका प्रतिनिधिहरुले मन्तब्यको क्रम्मा भन्ने गर्नुहुन्छ ।
हो थारुहरुको अधिकार अहिले सम्मपनि सुनिश्तिच हुन सकेको छैनन् किन भने यो आभास राज्यलेनै दिई रहेको छ भन्नेमा सबैलाई जगजाहेरै रहेको छ । नभए कसरी ईटहरी ८ टेंग्राटोलमा थारु महिलाहरुलाई राज्यले लाठि चार्ज गर्दै ग्रामथान भत्काईन्थ्यो होला ! थारु भाषा बोल्ने समुदायमा किन स्थानिय तहहरुमा अपनत्व भईरहेको छ्रैनन् । थारुहरुको आत्मनिर्णयको सम्मान किन एकात्म शासन जस्तै कुन्ठित हुदै छन् होला ! यस्तै यस्तै धेरै छन् संस्कार संस्कृतिमा कुन्ठित भएको । थाहा हुदा हुदै पनि थारु नेतृत्वकर्ताहरु राज्यको नेतृत्वदायी भुमिकामा पगेरपनि किन बोल्न सक्दैनन् थारु अधिकारका सवालमा,यो मौनता किन ! यसै सवालमा थारु समुदायहरु दृश्यहरु देख्दै निरासपनि हुनथालेका छन् यति सम्मकी भबिषयमा शर्णाथि जिवन बिताउन बाध्यहुने सिर्जना अहिलेनै भानहरु उब्जिदै छन् थारुहरुमा त्यसैले थाकस नेतृत्वको चर्चा अहिले चलिरहेको छ ।
यसै चर्चामा थाकस सुनसरीको भदौ २२ र २३ गते ८ औ अधिवेसन हुन गईरहेको छ । बिशेष पुर्वमा थारुहरु कसरी संरक्षण हुन सकिन्छ भन्नेमा प्रदेश एककैथारु बाुहल्य भएको सुनसरी जिल्ला हो । पुर्व र पश्चिम थारु भनिरहदा बिभाजनको बिचार नआओस कसैमा यो मेरो अनुरोध रहेको छ । सुनसरीको थाकस अधिवेसनको पुर्व सन्धयामा सुनसरीका थारुहरुमा उठिरहेको सवालको पक्षमा तर्कहरु मात्र रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसतै कुनै जातिय र जातियता बिरुद्ध होईन् यो राज्य संगको थारु समुदायको अधिकारका सवालमा प्रसंग रहेको अनुरोध गर्न चाहे ।
कुरा कहा गएर उथलपुथल र डाईभर्ट हुनजान्छ भने थाकसको नेतृत्वमा गरेको आन्दोलन उपलब्धिपनि भयो तर अझै थारु मुद्धाको सवालमा उठान गर्नु पर्ने अवस्थामा पछिल्लो समयमा किन मौन् । जनजाति महाँसंघ सुनसरीमा थारु प्रतिनिधि छन् तर थारु बाहुल्य ईटहरीमै भएको १९ औ बिश्व आदिवासी दिवसमा थारुहरुको पहिचान झल्किने झाँकी सहितको सहभागीता किन भएन ? ईटहरी ८ टेग्राटोल स्थित थारु महिलाहरुलाई प्रहरी प्रशासनबाट लाठि चार्ज गर्दै थारुहरुको ऐतिहासिक धरोहर बिच्छु ग्रामथान भत्काउदा थाकस सुनसरीले किन एक चुई बोल्न सकेन ? प्रदेश १ मा सबै जातजातिले आफनो पहिचान खोजिरहेको छ तर थाकस सुनसरीको संगठनमा किन त्यो अवस्था सिर्जजना भई रहेको छ । १९ औ बिश्व आदिवासी दिवसमा जनजाति महाँसंघ सुनसरीले गरेको कार्यक्रममा थारुहरुको बिच्छु ग्रामथानबारे मुद्धा किन बन्न सकेन जबकी थारुको प्रतिनिधि महाँ संघ सुनसरीमा रहेको छ । त्यसैले थारुको नाम बेचेर नेतृतवमा जाने तर परेको अवस्थामा चुपलागेर बस्ने प्रबृतिको नेतृत्वकर्ता सुनसरीका थारुहरु चाहेका छैनन् ।
थाकसको ७ औ अधिवेसनबाट पुनितलाल चौधरीको अध्यक्षतामा गठन समिति रहेको छ । थाकस सुनसरीको ८ औ अधिवेसनबाट नेतृत्वमा आउन बर्तमान जिल्ला सह सचिव शुरेन्द्र चौधरी (छिटहा),सचिव मनौज चौधरी (डुम्राहा), सत्यनारायण राजधामि(बक्लौरी),सुसिला चौधरी(ईटहरी) र ईनरुवा बलहाका मोहिनारायण चौधरीले नेतृत्वमा आउन खोजेको चर्चा थाकस स्रोतले जनाएको छ ।
यो चर्चा संगै प्रजातान्त्रिक र प्रगतीशिल नेतृत्व को कुरा पनि उठिरहेको छ । सुनसरीका थारुहरुले अब अधिकारको सवालमा शसक्त रुपमा लाग्ने प्रगतिशिल नेतृत्व आउनु पर्ने एकातर्फ आवाज उठिरहेको भने पुरातन सोचलाई हटाएर युवा नेतृत्वको खोजि पनि गरिरहेको छ । युवा पनि कस्ता युवा आउनु पर्ने त्यो चर्चा हुदै गर्दा थाकसको बिधानलाई संसोधन नगरे नयाँ बिचार धारका युवा आउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । तसर्थ चर्चामा रहेका नेतृत्वकर्ताहरुको ऐजेन्डा के के हुन् र त्यसलाई कार्यन्ब्यन गर्ने आधारमा ठोस पहलहरु के रहने भन्ने बिषयमा धारणाहरु आउन जुरुरी रहेको छ ।